Paarkiwwanii fi Bashannana | Ramsey County
Paarkiinii fi sirni bashannana Bulchiinsa Raamsee kan heektaara 7,900 uwwisu yommuu ta’u jiraattonnii fi daawwattoonni aarkicha keessa akka bashannanii fi itti toluuf carraawwan bashannansiisoo heddu ni dhiyeessa.
Daandiwwan maayila 92 ta'an
9 Paarkiwwan bulchiinsaa
6 Paarkiwwan naannoo
Wiirtuu Miidhagina Uumamaa Tamarack
Cabbiin mana keessatti bakkeewwan itti
Bakkeewwan taphni golfii itti tapahatamu
Bakka Paarkii Bishaanii Itti Taphatan
Wiirtuun Miidhagina Uummamaa Tamarack Magaala White Bear keessatti kan argamu yoommuu ta’u, bakka miidhagaa heektaara 320 uwwisu ta’ee namoota umurii garaa garaatiif sagantaa barnootaa waggaa guutuu kan kennuudha. Bakkeewwan Bareedina Uumamaa Daa’ima Barsiisuuf Gargaaran kanneen beekamoo ta’an tabba bahuudhaaan, dahannoo fi hidha muka irraa hojjachuudhaan, biqiltuu kunuunsu fi dhoqqee keessa boolla qotuudhaan daa’imman waa’ee uumamaa akka baratan gargaara. Gamoo/manicha keessa dhaabachuudhaan bineensota agarsiisaf dhiyaatanii fi sagantaalee dhiyeenyatti hojii jalqaban caalmatti baraa.
Paarkiwwan, daandiwwan paarkii keessaa fi qabeenyawwan uumamaa
Kanneen paarkii fayyadaman xiyya daarbachuu, simbirroota daawwachuu, bishaan daakuu, sigigaachuu dabalatee hojiilee gosa garaa garaa waktiilee Minesootaa hunda keessatti argamutti bashannanuu ni danda’u. Hojjattoonni bulchiinsichaa qabeenyawwan uumamaa ni eegu, ni kunuunsus. Kunis fayyaa fi nageenya lubbu qabeenyii 1,250 ol achi yookin gajjallaa bulchiinsichaa keessatti argaman mirkaneessufi.
Saroonni fi namoonni saree fidanii dhufan fiigudhaaf, keessa bashannanuu fi wal baruudhaaf kan gargaaran bakkeewwan dhoowwaa hin qabne afur adda bahanii jiru.
Dirree fi dahoowwan ispoortii gosa garaa garaa
Dirreewwan Bulchiinsa Raamsee manneen barnoota fi dhaabbilee naannotiin qillee, qajeelfama sigigachoo, sagantaale fi dorgommiiwwaniif fayidaarra oola. Sagantaaleen hawwaasaa kan of keessatti hammatu sigigaachoo banaa, xiyya darbachuu, dirree xaphaa irra marga hafuu fa’i. Ji’oota hoo’inni itti heddummatu keessa dirreewwan ispoortii akkasuma sagantaalee fi ayyaanota hawaasaa ni keessummeessu.
Bakka Paarkii bishaanii Bulchiinsa Raamsetti argamutti yeroo waktii hoo’aatti kootattii bishaan daakuu, walitti facaasuu fi sigigaachuu taphadhaa! Bakka Bishaan Ittiin Tapahatan Paarkii Naannoo keessatti kan argamu yommuu ta’u, paarkiin bishaanii maatiwwan ijoollee waggaa 10 fi isaa gadii qabaniif iddoo baay’ee mijataadha. Akkasumas haalli teessuma isaa iddoo irra sigigaatan marsaa/ gulantaa sadi kan qabu, puulii bishaanii gadi fagoo hin taane fi iddoo cirrachaa taphaaf mijataa ta’e kan qabuudha.
Namoonni golfii taphatanii fi sadarkaa dandeettii taphachuu garaa garaa irra jiran, koorsiwwan golfii jiran keessaa tokkoo isaatti baay’ee ni gammadu. Tokkoon tokkoo koorsiwaan kanneenii tajaajila afaanii, sagantaalee fi carraawan dorgommii wakticha keessatti argaman ni dhiyeessa.